Yiziphi izici eziyinhloko zamagama angukhiye e-Amazon ukuze aziwa yiwo wonke umuntu odayisa khona?
Ngokumane nje, amazwi angukhiye e-Amazon ngokwabo ajwayelekile uhlobo olufanayo lwezicelo zokusesha ezigcwaliswe abasebenzisi abajikelezayo kubha yosesho lwe-Google. Ngenxa yalokho, bazobona amakhasi noma amaphuzu afanayo okufakwa ohlwini aboniswa ekufakeni umbuzo othile wokusesha. Futhi ukubaluleka kokusingatha uphenyo lwegama elingukhiye seluvele lwaziwa kakhulu ngabaningi be-webmasters nabanamabhizinisi ase-intanethi, okungenani labo abasebenza ezitolo zokuthutha ezise-ecommerce-based, noma isibonelo abakhi bomhlaba be-niche. Akusho ukuthi mhlawumbe wonke ama-SEO afanelekile asevele ayithathile kalula - okuqukethwe kuhlale kuyinkosi, uma kuziwa ekutholeni ukulungiswa kokuseshwa. Futhi ukukhetha okulungile kwamagama angukhiye, kuhlangene nokusetshenziswa kwawo okuhle okuthunyelwe ngokusekelwe ngokuqondile okuyiyona nto eyenza impumelelo mhlawumbe yonke iphrojekthi ye-intanethi yanamuhla, kungekho okungaxhunyiwe - standard cafe table height. Yingakho kufanele ngivumelane nalabo abathengisi bethi uma kuziwa kumazwi angukhiye e-Amazon, ucwaningo olujulile olucwaninga ngokuvamile lubamba ingxenye engu-80% ebusa emzamweni wabo womhlaba wonke, kuyilapho yonke imisebenzi yabo esele yinto engaba ngu-20% kuphela.
Amagama angukhiye angu-1 ajwayelekile kakhulu futhi ayingqayizivele ama-Amazon
Ngokuvamile, amagama angukhiye egolide ahloswe ukuba abe phakathi kwezinto eziyigugu ezifunyenwe kwi-arsenal yazo zonke i-ecommerce ephumelelayo umdayisi. Yiqiniso, kunikezwa ukuthi osomabhizinisi abanjalo be-intanethi bahlakaniphile ngokwanele ukuba baqaphele kanye kanye nonke - amagama angukhiye egolide yilokho okushayela ukuguqulwa kwabo okuphezulu.Ukuthi, lamagama angukhiye kulindeleke ukuba abenze imali ngemva kwakho konke. Nakhu okumele ukwazi mayelana nezici zabo ezine eziyinhloko.
Izici ezine eziyinhloko ze-Amazon Golden Amagama angukhiye
Ngamanye amazwi, amagama angukhiye egolide ahloswe ukuba akwazi ukulawula ivolumu elanele lohlu lokusesha ohlwini lwazo lomkhiqizo. Kodwa-ke, phawula ukuthi lawo magama adingekayo kufanele aqhubeke enezinga elifanelekayo lokuncintisana - ukuze wenze kube lula ukuba uzibeke kalula. Ngakolunye uhlangothi, igama ngalinye elingukhiye legolide kufanele libe nemvelo enamandla kakhulu kangangokuthi yenza iningi lala maklayenti angathuthuki ekugcineni lichithe imali ekupheleni kohambo lwabo lokuba abathengi bangempela.
I-Volume Search - ingatholakala nalowo Mhleli wegama eliyinhloko le-Google elidala. Leli thuluzi cishe liwukuphela kokukhetha okulula ukuqala ukucwaninga amagama angukhiye e-Amazon ngendlela engcono kakhulu.
Ukuhlaziywa Kokuncintisana - kufanele kuthathwe ngokuhlanganyela ngesandla, kuyilapho izincintiswano zakho zingabuye zihlolwe ngezinhlaka ezithile ze-intanethi zamathuluzi esofthiwe njenge-Long Tail Pro, Amagama angukhiye e-Merchant, noma i-Jungle Scout. Bonke bakulungele ukukusiza ngomsebenzi. Ngakho-ke, kuwukuphela kwakho okumele uzame kuqala.
Isisesho Sosesho - sisho ukuthi amagama angukhiye aphansi we-search angukhiye ngezinye izikhathi angathwala isisindo esikhulu, ngakho-ke angase abe namandla ngaphezu kwenzuzo, kunanoma yiliphi elinye amagama angukhiye e-Amazon anezibalo eziphakeme kakhulu zokusesha.
Imigomo yokulungela ukuthenga - ivame ukusetshenziswa ngamakhasimende angase afike eduze nesinqumo sabo sokugcina sokuthenga. Isibonelo, ngaphambi kokushiya into ekhethiwe enqoleni, iningi lethu ngezinye izikhathi liyihlola futhi, ngalesi sikhathi lihlanganisa isicelo sokusesha sangaphambilini neminye yale migomo yokulungele ukuthenga njengokuthi "okuhle", "okulinganiselwe phezulu", " ikhwalithi "," ngingayithenga kuphi "," ukuphatha okuhle ", njll